Sida Looga Faa'ideysto Inta Badan Desktop-kaaga Guurista Mobilada | Martech Zone
Sida Looga Faa'ideysto Inta Badan Desktop-kaaga Mobilka Socdaalka
Talaado, September 11, 2018 Sabti, Febraayo 13, 2021 Douglas Karr
Xilliga degdegga ah ee lagu duubayo moobiilka, way u fududahay ganacsatadu inay iska indhatiraan goobahooda kombuyuutarrada, laakiin beddelka badankood wali waxay ku dhacaan qaabkan, sidaa darteed laguma talinayo inaad gebi ahaanba iska indhatirto bartaada desktop-ka. Xaaladda ugu wanaagsan ayaa ah in la helo goobo loogu talagalay dhufto badan; intaa ka dib, waa go'aan in la go'aansado haddii aad rabto degel taleefan oo keli ah, goob jawaab celin ah oo nuqul ka dhigaysa qaabka desktop-ka ee mobilka, barnaamij mobiil hawleed u janjeedha, ama xal isku dhafan.
Istaatistikada ku saabsan isticmaalka mobilada ayaa kusii socota Skyrocket
71% wadarta guud daqiiqado dijitaal ah oo internetka lagu qaatay Mareykanka gudihiisa wuxuu ka yimaadaa taleefanka gacanta. Taasi waxay u kacdaa 75% Mexico iyo ugu sarreysa 91% Indonesia. Boqortooyada Ingiriiska ayaa xoogaa ka dambeysa 61%.
Mareykanka dhexdiisa, dadka waaweyni waxay ku qaataan celcelis ahaan 87 saacadood bishii khadka tooska ah on casriga ah marka la barbar dhigo desktop ah.
Ku dhowaad 70% dadka waaweyn ee Mareykanka ah isticmaal miisaska desktop iyo mobilada, oo leh nambarrada keliya ee kumbuyuutareed iyo moobiillada isticmaala oo labadaba dul wareegaya calaamadda 15%.
Waxaa muhiim ah in la ogaado tirakoobyadan in aysan ka wada wareegeynin desktop-ka una wareejin mobile inta badan dabeecadaha isticmaaleyaasheena ayaa u wareegaya desktop AND mobile. Tusaale ahaan, inta badan waxaan wax uga iibsadaa alaabada qadka tooska ah adoo adeegsanaya aaladda moobilka aniga oo daawanaya telefishanka. Laakiin dhab ahaantii ma iibsan karo illaa aan ka daawado sheyga kumbuyuutarkeyga halkaas oo aan ku arki karo faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan sawirada alaabada, iwm.
Ka soo horjeedka waa run sidoo kale. Marar badan dadka shaqeeya waxay ku ogaan doonaan maqaal ama shey internetka, ka dibna ku keydso aaladda moobaylka si ay hadhow u eegaan. In kasta oo moobiilku noqonayo go-to, had iyo jeer ma aha midka caadiga ah.
Maaddaama riixitaanka moobiilka, u dhow isgaarsiinta goobta, iyo geolocation ay noqdaan aalado hawlgal caqli badan oo ku saabsan codsiyada moobiilka, waxaan is arkaa aniga oo adeegsanaya barnaamijyo aad iyo aad u badan sidoo. Hal tusaale waa supermarket-ka deegaanka, Kroger. Barnaamijkooda moobilka ayaa isla markiiba igu wargaliya markaan albaabka ka galo Kroger-kayga maxalliga ah waxayna i xasuusineysaa inaan furo barnaamijka oo aan raadsado waxyaabo gaar ah. Intaas oo kaliya maahan, tirakoobka alaabtooda ayaa sidoo kale ii sheegaysa wadiiqooyinka aan ka heli karo badeecada. Bartilmaameedka iyo waqtigu wuxuu ku dhisan yahay barnaamijyo, laakiin had iyo jeer sax ma'aha iyadoo la adeegsanayo biraawsarka shabakadda moobiilka.
Infograafigani ka yimid ERS, Kooxda adeegyada taageerada IT-ga ee la maareeyay, waxay ka hadlaysaa fursadaha kala duwan ee tixgelinta la siinaayo markii aad u guureyso websaydhka kombuyuutarkaaga oo aad u wanaajiso mobilka. Waxa kale oo ay ka hadlaysaa marka ganacsigu rabo inuu bartilmaameedsado mobilada websaydh gebi ahaanba ka duwan, degel wax ka qabta midkood moobiil ama desktop, codsi moobayl ah, ama mid kasta oo xalka isku jira. GoDaddy, tusaale ahaan, wuxuu leeyahay barnaamij weyn oo moobiil ah oo lagu magacaabo Maal-gashadeyaal taas oo ka dhigaysa mid fudud dadka xiisaynaya bogagga inay helaan oo ay iibsadaan… waa badeecad qaali ah laakiin aad uga fudud websaydhka la isticmaalo.
Tags: naseexooyinka naqshadeyntasocdaalka mobile desktopW oodnaxalka moobiilka isku dhafaninfographicapp mobilecodsiga mobiletalooyinka qaabeynta mobiladatirooyinka wareegamobilada socdaalkabogga mobiladabogga jawaabta leh